Ahoana no hanovako ny fahatsapana ny bokotra an-trano amin'ny iPhone 7? The Fix! - Iphone
ny fomba tsy hamonoana ny telefaoninao
facetime tsy misy amin'ny iphone
voromahery vs falcon vs Hawk
iPhone dia tsy afaka mamerina ny backup
karazana alika ihany resahina ao amin'ny Baiboly
Ahoana no hanovako ny valiny amin'ny bokotra an-trano an'ny iPhone 7? Ity ny The Fix.
Nividy iPhone 7 vaovao ianao ary mahazo ny fahatsapana ny fomba fiasan'izy ireo fotsiny. Hamarino ny mailakao ianao ary handeha hanidy ny mailaka mailaka rehefa - andraso segondra - ny bokotra tranokala iPhone dia tsy manindry. Kosa kosa dia mihetsiketsika kely ny iPhone rehefa manindry ny bokotra an-trano ianao. Mieritreritra ianao hoe: “Tapaka ve ny bokotra tranoko?”
Soa ihany, mandeha tsara ny bokotra tranonao. Nesorin'i Apple avy amin'ny iPhone 7 ny bokotra azo tsindriana, fa tsy natao ho bokotra fisaka izy io. Rehefa tsindrio ity bokotra ity dia omena ny motera taptic vaovao an'ny iPhone 7. ny maotera taptic dia ilay motera kely mampihovotrovotra manetsiketsika kely ny telefaoninao mba hahatonga ny bokotra an-trano ho toy ny bokotra tena izy rehefa tsindriana.
Ny iray amin'ireo zavatra mahafinaritra amin'ny fifindrana amin'ny motera taptic dia ny fahafahanao manova ny 'fahatsapana' ny bokotra tranonao rehefa manery azy ianao. Ao amin'ity lahatsoratra ity, Hasehoko anao ny fomba fanovana ny tsindry bokotra an-trano an'ny iPhone 7 anao.
Manova ny fahatsapana bokotra an-trano iPhone 7 anao
Ny fanovana ny tsindry bokotra an-tranonao iPhone 7 dia dingana mahitsy. Hitety anao eto ambany aho.
Sokafy ny Fikirana fampiharana amin'ny iPhoneo ary paompy General .
Mizaha mankany afovoan'ny efijery ary kitiho ny Button an-trano safidy.
Hahamarika tarehimarika telo eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery ianao: iray, roa, ary telo. Tsindrio ireo safidy ireo ary kitiho ny bokotra tranonao hijerena mialoha ny ho tsapan'ny valin'ny bokotra trano vaovao.
Raha vantany vao hitanao ny tsindry tsapanao fa tsindrio ny hatao bokotra ny zoro ambony havanana amin'ny efijery. Ny fahatsapana ny bokotra tranonao dia novaina.
Trano sambatra (bokotra)
Ary izany ihany no ilaina amin'ny fanaingoana ny tsindry bokotra an-tranonao iPhone tsindrio. Ampahafantaro ahy ny fanovana tsindry ampiasainao amin'ny iPhone 7 ao amin'ireo hevitra. Izaho manokana dia mampiasa ny safidy telo satria hitako fa io no bokim-pitadiavana mahazatra indrindra.
iphone 5s efijery tsy mandeha